2007-08 ကလိုရွှေရောင်နေ့သစ်ရောက်ဖို့ လိုအပ်ချက်များကို ဆိုးရှားလ်ပြောပြီ – FBV SPORT NEWS
2007-08 ကလိုရွှေရောင်နေ့သစ်ရောက်ဖို့ လိုအပ်ချက်သောအချက်များကို ဆိုးရှားလ်ပြောပြီ
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ဟာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းစဉ်လာအကြီးဆုံးအသင်းအဖြစ် မှတ်တမ်းများစွာနဲ့ ဆုဖလားပေါင်းများစွာ အောင်မြင်အမှုအပေါင်းသရဖူဆောင်းခဲ့သော အသင်းတသင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်….
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ဟာ နည်းပြဟောင်းကြီး ဆာအဲလက်စ်ဖာဂူဆန်ကိုင်တွယ်ပြီးချိန်မှစပြီး အနားယူအထိ အောင်မြင်မှုစံချိန်များကို တခုပြီးတခုသိမ်းပိုက်ကာ ဥရောပတလွားမှာလည်း မင်းမူကြီးစိုးခဲ့ပါတယ်….ဆာအဲ့လက်စ် အနားယူပြီးနောက်ပိုင်း အောင်မြင်တွေဟာ တဖြည်းဖည်းမှေးမှိန်လာခဲ့ပါတယ်….
ယခုလက်ရှိ နည်းပြအိုလေ ဂန်နားဆိုးရှားလ်ဟာ နည်းပြအဆက်ဆက်ပြောင်းလာခဲ့တဲ့ ယိုယဲ့နေတဲ့အသင်းကို ဝေဖန်ဒဏ်တွေကြားကနေ လက်ရှိတွင် ဝါရင့်ကစားသမားမပါဘဲ လူငယ်ခြေတက်ကစားသမားများနဲ့ ၂၀၂၀ အကုန်မှာ ပရီးမီးယားလိဂ် အမှတ်ပေးဇယားအဆင့် (2) နေရာကို ဆွဲခေါ်လာခဲ့ပါပြီ…..
နည်းပြဆိုးရှားလ်က မိမိတို့ ယူနိက်တက်အသင်းဟာ ဖလားအိမ်မက်ရှင်သန်ဖို့အတွက် လိုအပ်ချက်များရှိနေသည်ကို ဝုဗ်အသင်းကို အနိုင်ရပြီးသည့်အချိန်တွင် ဝန်ခံခဲ့ပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲသွားမည်ဟု လည်းပြောခဲ့ပါတယ်..ယခု MUTV အင်တာဗျူးတွင် ဆိုးရှားလ်က မိမိတို့အသင်းလိုအပ်ချက်များကို ပြောပြဆွေးနွေးသွားခဲ့ပါတယ်….
ဆိုးရှားလ်က ” ကျနော်တို့ ယူနိက်တက်ဟာ ၂၀၂၀ ရာသီကုန် ကို ယခုလို အဆင့် (၂) မှာရပ်တည်အောင် စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ ကစားသမားတွေအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…..ကျနော်တို့ဟာ အခက်အခဲတွေ ဝေဖန်မှုတွေ ဒဏ်ရာ ပြသနာတွေကြားထဲကနေ ယခုလို လက်ရှိ အကောင်းဆုံးပုံစံကိုပြသနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်…
ဒါပေမဲ့ လိုအပ်ချက်များစွာရှိနေပါသေးတယ်…..ကျနော်တို့ပရိတ်သတ်တွေဟာ ၂၀၀၇-၀၈ ရှေ့ပိုင်းက ရွှေရောင်လွမ်းတဲ့နေ့ရက်တွေကို တောင်းတနေကြပါတယ်..ကျနောတို့ကြိုးစားနေပါတယ်..နောက်ပြီး အသင်းမှာ လိုအပ်ချက်တွေထဲက နောက်တန်း ခံစစ်ပိုင်းတွေကို လာမယ့် ဇန်နဝါရီ အပြောင်းအရွေ့မှာ အကုန်ပြင်ဆင်သွားပါတယ်….
အဓိက က နောက်တန်းအားနည်းချက်တွေကို ကျနော်ပြင်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီရာသီရလဒ်အားလုံးကို အကောင်းဆုံး ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်….နောက်တခုကတော့ တောင်ပံတိုက်စစ်အားဖြည့်တင်းမှုတွေလည်းထပ်လုပ်ပါမယ်….ကျနော်တို့ ဟာ 4-2-3-1 ကိုဘဲ ကစားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် တောင်ပံတိုက်စစ်ကို သိပ်အသက်ဝင်တဲ့ပုံမမြင်ရပါဘူး….
ဒါပေမဲ့ လာမယ့် ဇန်နဝါရီအပြောင်းအရွေ့ပြီးရင် နည်းပြကြီး ဆာအဲလက်စသုံးခဲ့ဖူးတဲ့ 4-4-2 ကစားကွက်ကိုလည်းတောင်ပံတိုက်စစ်အသစ်တွေကို ဖြည့်တင်းသွားမှာဖြစ်တာမို့ ကျနော်တို့ ယူနိက်တက်ဟာ ပြန်လည်တောက်ပလာမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ် ” ဟု MUTV မှာပြောသွားခဲ့ပါတယ်…